UW Medical Center iyo Harborview Medical Center Xeerka Biilka iyo Ururinta | UW Medicine
UW Medical Center iyo Harborview Medical Center Xeerka Biilka iyo Ururinta
Iskaashiga shaqada UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waa inay horumariyaan caafimaadka dadwaynaha iyaga oo faafinaya aqoonta caafimaadka, iyaga oo siinaya daryeelka koowaad iyo ka takhasuska oo heersare ah dadkan gobolka, sidoo kalena soo saaraya dhakhaatiirta, saynisyahanada iyo xirfadlayaasha kale ee caafimaadka ee mustaqbalka. Si shaqadaasi u suurtogasho isbitaalku waxa uu u baahan yahay in uu dhaqangaliyo xeer ururinta daynta kaasi oo:
kor u qaadida in wakhtigeeda la bixiyo adeegyada la bixiyo.
bixisa ikhtiyaaro damacsan oo faro badan oo ka jawaabaya bukaanada waajibaadkooda dhaqaale.
isku darka xarumaha iyo kharashka xirfadlaha oo la iskaga dhigayo hal bayaan oo taariikhda adeegyada oo aan ka badnayn 3/272021.
ku dadaala tayada adeega macmiilka ee lagu xalinayo su’aalaha kharashka barnaamij kaliya.
Kharashka Lagu Dallacayo Caymiska:
Adeegyada Dhaqaalaha Bukaanka ee UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waxa ay kharashka ku dallici doonaan gobolka, fadaraalka iyo shirkadaha ganacsiga ee caymiska. Bukaanka uma qabsanayno wax kharash ah ilaa aanu caymiska kala baxno, taas oo ay kamid tahay diidmada rafcaanada laga qaatay. Markasta oo ay macquulka tahay, waxaanu noqonayaa mid u doodaa xaqa bukaanka si aanu ugu soo dhicino kharashka caymiska kahor xarunta iyo sheegashada xirfadlaha inta aananu u beddelin lacagta mid qofku iska bixinayo.
Xisaabaadka qofku iska bixinayo lacagta waa in lagu bixiyo 30 maalmood laga bilaabo marka ay soo gaadhay bayaanka ee ugu horreeysey haddii aan heshiis kale la galin.
Baaqiga uu qofku bixinayo ee inta caymiska kasoo hadha waxaa lagu bixin doonaa 30 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta warbixinta la helay.
UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waxay diraan bayaanada bukaanka 30-kii maalmoodba mar ilaa 120-ka maalmood ee wareegga ah.
Muddadaas, bukaanadu waxa uu fursad u haystaan inay bixiyaan kharashka oo dhammaystiran ama gaadhaan heshiis dhaqaale oo ay kujiraan:
Qorshe kharash bixin
Kaalmo Dhaqaale (samofal)
Bixinta xog dheeraad ah ku dallicidda biilashada bixiye kale ama caymis
Wicitaanada macaamiisha ayaa la bilaa si loo helo lacagta ama loo gaadho heshiis dhaqaale.
Bayaanka afraad waa “Wargelinta ugu Dambaysa” oo la socodsiinaysa dammiinka in xisaabtoodii lagu wareejinayo hay’ad ururisa daynta xumada oo bannaanka ah haddii ayna bixin lacagta ama ayna heshiis bixineed ku galin muddo 30 maalmood ah.
Haddii aan laga soo jawaabin ama aan lacagta oo dhammaystiran la bixin waxay keeni kartaa in lagu wareejiyo hay’adda ururisa daynta xumada.
Dhammaan bukaanada caqabadaha sheegta dhaqaale xumo waxaa dib u eegid lagu samayn doonaa inay heli karaan Kaalmo Dhaqaale iyo/ama Medicaid. Waxaa la bixin karaa Kaalmada Dhaqaalaha wakhti kasta, xataa marka la diro hay’dda daynta ururisa balse waa in la codsada intaan xukun maxkamadeed dhicin.
Ikhtiyaarada Qiimo Dhimista:
UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waxay bixiyaan qiimo dhimis shakhsi ahaaneed oo ay siiyaan bukaanka iyo damaanad qaadayaasha aan caymiska lahayn ama qaada adeegyada aanu bixin caymisku. Qiimo dhimista waxaa lagu bixiyaa oo laga dalban karaa nidaamka kharash bixinta kharashka xarunta iyo xirfadlaha.
Bilaa caymis (aanu bixin caymisku) lacag bixinta oo dhan kahor adeegyada
30% qiimo dhimis ah
10% qiimo dhimis ah 30% ayaa la dalbanayaa
Bilaa caymis (aanu bixin caymisku) lacagta oo dhan adeegyada kadib
30% qiimo dhimis
Caymis leh (aanu bixin caymisku) lacagta oo dhan kahor adeegyada
30% qiimo dhimista
10% qiimo dhimis ah kadib 30% marka la dalbado
Laga jaro, wada bixinta, iyo/ama wada jirka qiimo dhimis laguma sameeyo
Caymis leh (aanu bixin caymisku) lacagta oo dhan wixii adeegyada aanu caymisku bixinaynin kharashkooda
Laga jaro, wada bixin iyo/ama caymis wadareed malaha qiimo dhimis
Hadii adeegyada la heley loo arko xaalad ahaan in aanu caymisku bixinaynin kharashkooda waalidka / damaanad qaadaha caymiskiisa, qiimo dhimista bilaa caymiska ah waxaa loo dalban karaa adeegyada aanu bixin caymisku.
Ikhtiyaarka Lacag Bixinta U Haboon Qofka:
UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waxa ay qaataan lacag cadaaan ah (kaliya xafiiska khasnajiga), jeeg shakhsi ahaaneed, jeeg elektoroonig ah ama kiridhid kaadh.
Kaadhka kiridhidka iyo Jeegaga bixinta waxaa lagu aqbalaa:
Bixinta Lacagta Onleynka ah oo dhamaystiran ama qayb ah qorshaha bixinta kharashka MyChart 24/7 mychart.uwmedicine.org
Khadka taleefanka tooska ah oo furan 24/7 – la hadal 206.520.0400
Adeega Macmiilka Isniin-Jimce 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo (marka laga tago maalmaha ciidaha ah) in la bixiyo ama la samaysto qorshe bixineed – la hadal 206.520.0400
Lacagta cadaanka ah waxaa lagu bixiyaa kaliya Xafiiska Khasnajiga ee UW Medical Center-Montlake iyo Harborview
Qaybta bukaanka waxaa la bixinayaa marka bayaanka kharashka ka bixitaanka la bixiyo iyada oo qorshaha bixinta la sameeyo moojee ama Kaalmo Dhaqaale la dalbado oo la gubiyo arjigeeda moojee.
Heshiisyada bixinta kharashka waxaa lagu sameeyay codsi bukaanka ee Xisaabaadka Bukaank iyo Adeegyada Taageerada. Tani waxay dhigaysaa in bukaanku uu 12 bilood uu ku bixin karo xaddi lacageed oo isku mid ah, ama 24 bilood haddii loo ansixiyo inay duruufo jiraan.
Marka uu bukaanku galay shil ama cid ku tacadiday, shirkaddooda caymisku
guud ahaan ma bixiso kharashka adeeggooda caafimaad marka la ogaado inay cid kale ka masuul tahay. Sidoo kale, bukaanku haddii aanu lahayn caymis balse uu doonayo inay ka bixiso cidda ka bixinaysa kharashka. Markay xaaladdu sidan tahay UW Medicine waxay gudbin kartaa dammaanad ka dhan ah wixii lacag laga bixinayo dhaawaca shakhsi ahaaneed ee mustaqbalka. Foomka dammaanaddu waa mid lagu sugayo danaha dhabta ah ama hantida qofka si amaanda loo bixiyo.
Xisaabaadka Loo Wareejiyay Si Loo soo Ururiyo: Shaqada waxaa kamid ah:
Wargelinta hore ee lagu wargelinyo dammiinka in uu kaga soo jawaabo 30 maalmood kadib marka uu kusoo gaadho wargelintani oo aad ka muranto saxnaanta dayntan ama qayb kamid ah, xafiiskan waxa uu u arkaa in dayntu sax tahay: oo ay u qalanto in la gaadhsiiyo ka warbixinta daynta maalinta 180aad.
Xog dheeraad ah oo ku saabsan xisaabta ururinta:
Xisaabaadka Bukaanka iyo Adeegyada Taageerada waa inay ansixisaa wixii tallaabo sharci ah ee laga qaadayo xisaab.
Xisaabaadka Bukaanka iyo Adeegyada Taageerada oggolaan mayso dacwayn haddii ayna jirin shaqo uu qofku ka shaqeeyaa.
Dacwada ay xaraynayso UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waxaa qaban doona Kaaliye Xeer-Ilaaliye oo “Gaar ah” oo la shaqeeya hay’dda.
Xisaabaadka lagu meeleeyey mid kamid ah labada hay’adood ee qandaraaska ku qaatay muddo hal sano ah waxa lagu meeleeyaa hay’ad kale oo labaad, haddii aan la bixin lacagta ama xukun sharci ahi soo bixin.
Xisaabta cidda kale soo celisay waxaa loo aqoonsan doonaa in aan la helaynin waxaana laga saari doonaa Daynta ay inoogu maqan tahay Hay'adda Ururinta Dayntu Xisaabka La Sugayo (A/R).
Daynta baaqiga ah waxa ay ku jiri doontaa xisaabaadka dammaanad-qaadaha toddoba sano ama toban sano haddii xukun sharci ah u soo baxo.
Tallaabooyinka Ururinta Kharashka ee Aan Caadiga Ahayn (ECA):
ECA waxaa kamid ah ku wareejinta wakiilka hantida shakhsi ahaaneed, gaadhsiinta hay’ada daynta shakhsiga, ka jaritaanka mushaharka iyo dalabka bixinta ama kaydka kahor inta aan la bixin daryeelka caafimaadka ee daruuriga ah. Xisaabaadka bukaanka waa in aan lagu samaynin wax ECA ah, iyada oo UW Medical Center, Harborview Medical Center ama hay’adaha ay wada shaqeeyaan ee lagu qoray.
Xarumaha Caafimaadka kama masuul aha go’aaminta u qalanka kaliya iyada oo ka helaya ka tanaasu la saxeexay bukaanka, aan ahayn Isbitaalka taas oo loo arko in dadaal macquul ah uu sameeyay hadii Isbitaalka uu go’aamiyo in aanu u qalmin taas oo ku salaysan macluumaadka loo arko in aanu sax ahayn ama uu khaldan ama laga heley bukaanka isaga oo la khasbay ama loo caga jugleeyay. Dadaalka macquul ah ayaa la samayn doonaa si loo ogaado u qalanka Kaalmada Dhaqaalaha oo ay kamid yihiin kuwa soo socda;
Wixii ECA ah ee la bilaabo waa la joojinayaa haidi arjiga buuxa aan la helin, wargelin qoraal ah ay ka maqan tahay macluumaadka/waraaqaha loo diray bukaanka oo ay ku jiraan wixii wargelin ah ee ECA ee Xarunta Caafimaadka (ama wakiilka Xarunta Caafimaadka) ayaa la bilaabi karaa ama dib loo wadi karaa hadii arjiga ama bixinta lacagta aan la helin taariikh gaar ah;
Dhamaan bayaanada bixinta lacagta oo ay la socdaan wargelinta laga shakiyo ee ku saabsan Kaalmada Dhaqaale oo wadata lambarka taleefanka loola hadlayo macluumaadka/kaalmada iyo cinwaanka websaytka ee tooska ah waxaa loo koobiyeeyay Kaalmada Dhaqaale waraaqaha ah ee la heley;
Guudmarka luuqada cad ku qoran ee Kaalmada Dhaqaale waxaa kamid ah bayaanka bixinta lacagta 4aad si loo kordhiyo la socodka;
Buuxinta arjiyada Kaalmada Dhaqaale wakhtiga ku munaasabka ah ayaa lagu mariyaa nidaamka arjiga bukaankana waxaa lagu wargeliyaa qoraal waxa la go’aamiyay, waxaa la siin doonaa bayaanka biilka ugu danbaysay haddii baaqi jiro, waana loo celiyaa lacagta haddii lagu bixiyay lacag wakhtiga la ansixiyey kaasi oo uu xoojiyey arjigu.
Xarumah Caafimaadku waxa uu galiyay dadaalkii la rabay si uu u ogaado u-qalmidda bukaanka Kaalmada Dhaqaale ee u diyaarka ah isaga oo raacaya xogta u-qalmidda bukaanka ee hal sabab ama wax ka badan-barnaamijyada dadwaynaha ee la tijaabiyey.
Xarumaha Caafimaadka waxa uu siin karaa Kaalmo Dhaqaale bukaanka ku hoobta inuu dhiibo xogta/dokumentiyada looga baahnaa oo dhammaystiran ee arjiga Kaalmada Dhaqaalaha.
Shuruudaha wargelinta ee soo socda waa la buuxiyay (ugu yaraan kahor 30 maalmood bilaabista ECA ):
Bixinta guudmarka luuqadda cad ku qoran ee Xeerka Kaalmada Dhaqaale ;
Isku-dayo la sameeyey in afka loogaga waramo bukaanka Xeerka Kaalmada Dhaqaale iyo arjiga Kaalmada Dhaqaale
Sheegista amaahda ayaa iman karta 180 maalmood kadib qaansheegta koowaad ee isbitaal ka bixidda kadib.
Dadaal ku filan ayaa la geliyay si loo ogaado u-qalmidda bukaanka Kaalmada Dhaqaale. In si
Siman Loola Dhaqmo Dhammaan Bukaanada/Damiinada:
UW Medical Center iyo Harborview Medical Center waxay uga shaqeeyaan xisaabaadka bukaanka qaab waafaqsan xeerkan kharash qaadidda. Xaaladdii doontaaba ha jirtee looma eego hirgalinta xeerkan da’, isir, midab, jinsi, doorashada jinsiga ama waddanka qofku uu ka soo jeedo.
Nuqul xeerkan ah, iyo sidoo kale nuqullo Xeerka Kaalmada Dhaqaale, Guudmarka Luuqadda Cad ku Qoran ee Kaalmada Dhaqaale iyo arjiga Kaalmada Dhaqaale waxaa lagu heli karaa iyada oo lala xidhiidhayo goobaha Kaalmada Dhaqaale ee Dawooyinka UW. Sidoo kale, waraaqaha waxaa laga heli karaa online ahaan uwmedicine.org/financialassistance .
Websaytka Caymiska UW Medicine iyo Kharashka Dalicida waxa uu siiyaa bukaanka uwmedicine.org/patient-resources/billing-and-insurance.